La soco soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Raad-raac Warshad kabo
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Excavator Track Shoe Bulldozer Track Plate Assembly
qaybaha dayactirka ee dhulka taabanaya loona adeegsanayo dhaqaaqa mashiinka.
Tani waxay u baahan tahay dusha sare ee xoogga kabaha raadadka iyo iswaafajin kaamil ah balka.
waxaan ku siin karnaa tiro noocyo kala duwan ah. Sidoo kale waxaan sameyn karnaa muunad ku saleysan baahidaada inaad tijaabiso alaabtayada.
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Bulldozer Track Shoe Plate Assembly
Bonovo Waxay Kuu Keeni Kartaa Qeybo Kala Duwan Oo Ah Gawaarida Gawaarida ee Badeecadaha Badankood iyo Mashiinada Kale ee Diiriga ah. Iyada oo in ka badan Toban Sano oo Shaqaale Khibrad Leh ay ugu halgamayaan kaamil ahaanta geeddi socod kasta, Bonovo waxay sii wadaysaa bixinta tiro aad u tiro badan oo ah Qaybaha Guuriska ee Xooggan oo leh Qiimaha ugu Fiican Caalamka.
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Kabaha PC250 PC270 PC280
Marka loo eego noocyada martida ee kala duwan iyo xaaladaha shaqada, godadka daadadka dhoobada ee kabaha raadadka waxaa loogu talagalay in lagu yareeyo waxyeelada walxaha adag ee dibadda ee wadada isla markaana loo hagaajiyo bedelka kabaha wadada.
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Bulldozer Track Shoe MS30 MS40 SY55 CX58C
Bonovo waxay bixisaa noocyo kaladuwan oo ah seddex gabi ahaanba kabaha qotada jeexjeexa laga bilaabo 300mm ilaa 1200mm dhamaan cabirrada caadiga iyo kuwa aan caadiga ahayn.
Marka loo eego noocyada martida ee kala duwan iyo xaaladaha shaqada, godadka daadashada dhoobada ee kabaha raadadka waxaa loogu talagalay in lagu yareeyo waxyeelada walxaha adag ee dibadda ee wadada isla markaana loo hagaajiyo bedelka kabaha wadada;
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Kabaha Rakhiga R35 R229 MS110 MS120
Bonovo waxay bixisaa noocyo kaladuwan oo ah seddex gabi ahaanba kabaha qotada jeexjeexa laga bilaabo 300mm ilaa 1200mm dhamaan cabirrada caadiga iyo kuwa aan caadiga ahayn. Waxaan sidoo kale bixinnaa kooxo wadooyin isku dhafan oo leh silsilad / isku xirnaanta kabaha silsiladda si aad ugu haboonaato shuruudahaaga. Sidoo kale waxaan sameyn karnaa muunad ku saleysan baahidaada inaad tijaabiso alaabtayada.
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Kabaha EC260 EC280 EC320 EC360B EC380 EC420
Bonovo waxay siisaa noocyo kaladuwan oo seddex jeex jeex jeex jeex jeexan ah 300mm ilaa 1200mm dhamaan cabirrada caadiga iyo kuwa aan caadiga ahayn.
Waxaan sidoo kale ku siineynaa kooxo isku-dhafan oo isku-dhafan oo leh silsilad / isku xirnaanta kabaha kabaha si loo daboolo shuruudahaaga.
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Excavator Track Shoe Plate EX120 EX200-2 EX200 EX210-5
Bonovo Waxay Kuu Keeni Kartaa Qeybo Kala Duwan Oo Ah Gawaarida Gawaarida ee Badeecadaha Badankood iyo Mashiinada Kale ee Diiriga ah.
Iyada oo in ka badan Toban Sano oo Shaqaale Khibrad Leh ay ugu halgamayaan kaamil ahaanta geeddi socod kasta, Bonovo waxay sii wadaysaa bixinta tiro aad u tiro badan oo ah Qaybaha Guuriska ee Xooggan oo leh Qiimaha ugu Fiican Caalamka.
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida CAT303E CAT320 CAT330 CAT345
Bonovo waxay bixisaa noocyo kaladuwan oo ah seddex gabi ahaanba kabaha qotada jeexjeexa laga bilaabo 300mm ilaa 1200mm dhamaan cabirrada caadiga iyo kuwa aan caadiga ahayn. Waxaan sidoo kale bixinnaa kooxo wadooyin isku dhafan oo leh silsilad / isku xirnaanta kabaha silsiladda si aad ugu haboonaato shuruudahaaga.
Qodista qashin qubka, waxaan keydineynaa kabo kabadan oo hal waddo ah dhamaan heerarka balacyada si loo buuxiyo shuruud kasta. Dhammaan kabaha raadraaca qodda waxay leeyihiin aasaas hawleed culus si loo kordhiyo nolosha adeegga.
Qaybaha Gawaarida Gawaarida ee BONOVO
Kabaha miinada ee culeyska culeyska culus leh ayaa qaata "laba-ilkood" iyo qaab-dhismeedka jeexjeexan ee ku dhow, taas oo kaliya aan si wax ku ool ah u hagaajinin xajinta wadada, laakiin sidoo kale ka ilaalinaysa furitaanka iyo jajabka ay keento is-beddelka qallalan ee kabaha raadku markuu dhan yahay mishiinka waa la rogay.
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Kabaha SK100 SK120 SK200 SK270
Isticmaalka daaweynta kuleylka gaarka ah, flatness ee sheyga waxaa lagu xakameynayaa jihada jihada, iyo qallafsanaanta iskutallaabtu waa isku mid, oo leh qalab farsamo oo wanaagsan iyo iska caabin wanaagsan;
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Nalalka E330 E324 E320
Tani waa badeecadaheena caanka ah ee gawaarida hoose. Baaxadeena ganacsi ee taxanaha qaybaha hoosta ayaa inta badan ah qeybaha dayactirka ee dhulka taabanaya loona adeegsanayo dhaq dhaqaaqa mashiinka.
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Kabaha SK100, SK200, SK300, SK320